Dhibaatada "Xogta Weyn" | Martech Zone
Wednesday, April 9, 2014 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Mid ka mid ah ereyada ugu caansan ee umuuqda inay kusoo ifbaxayaan goob kasta oo tiknoolajiyad ah maalmahan waa xog weyn. Waxaan u maleynayaa in warshaduhu ay wax u dhimayaan adeegsiga xad dhaafka ah iyo sawirka aan saxda ahayn ee ay ku muujinayaan waxa run ahaantii dhacaya.
Xogta waawayn waa eraybixin, ama weedh qabasho ah, oo loo adeegsado in lagu sharaxo mug ballaadhan oo ah xog habeysan iyo mid aan habeysneyn oo aad u ballaaran oo ay adag tahay in la farsameeyo iyadoo la adeegsanayo keyd dhaqameed iyo farsamooyin software ah. Sida laga soo xigtay Webpedia
Dhibaatadu waxay tahay in xogta weyn aysan kaliya ahayn a keyd weyn. Xogta weyn asal ahaan waa sharaxaad 2-cabbir ah. Dhibaatadu waxay tahay in shirkadaha kaliya aysan la dagaallameynin keydadka macluumaadka waaweyn, waxay la dagaallamayaan xawaaraha xogta. Xog badan oo xog ah ayaa ku soo socota waqtiga dhabta ah ee ay tahay in si caadi ah loo soo bandhigo loona soo bandhigo qaab keenaya falanqeyn ku saabsan waxa dhaca waqtiga.
Waxaan rumeysanahay in sawirka saxda ah uu noqon karo xogta qulqulka. Xogta qulqulka ayaa leh labadaba ballanqaad ah helitaanka xogaha macluumaadka ee suuqleyda ay ka faa'iideysan karaan, iyo sidoo kale waqtiga dhabta ah, Daalacanayo iyo saadaalin falanqeyn ku siin kara suuqleyda fursado ay ku hagaajiyaan istiraatiijiyadooda si loo kordhiyo natiijooyinka. Nidaamyadu waa inay caadi ka dhigaan, keydiyaan, soo bandhigaan oo saadaaliyaan si aan si dhab ah uga faa'iideysano durdurrada xogta badan ee la heli karo.
Ha ku kadsoomin suuq-geynta hadalka ku xeeran xog weyn. Xalalka ayaa horeyba ujoogay in laga baaraandego tiro badan oo xog ah. Taabashada xogta qulqulka waa waxa aan runtii u baahanahay.
Tags: xog weynxogta qulqulka
Transera: Falanqaynta Ka Qaybgalka Macaamiisha Xarumaha Xiriirka
Apr 9, 2014 at 4: 45 PM
Waxaan si buuxda ugu raacsanahay qeexitaankaaga iyo sida "xogta weyn" ay u noqotay ereyga kulul. Waxaan saakay wada sheekeysi la yeelanay nin aan wada shaqeyn jirnay oo ku saabsan "ereyada xanafta leh."
Dhibaatadu waxay tahay, isticmaalka xad-dhaafka ah, waxaad waraabineysaa ujeeddada dhabta ah iyo macnaha ka dambeeya illaa inta badan ee maqashay iyo adeegsatay aysan si dhab ah u fahmin. Waxyaabo la mid ah ayaa ku dhacay "kombuyuutar xisaabinta" liistaduna way socotaa.
Apr 11, 2014 at 9: 12 PM
Dhab ahaantii akhris weyn. Waxay ahayd xog warran Doug, mahadsanid wadaagida !.
Apr 14, 2014 at 3: 06 PM
Maqaal weyn Doug. Taabashada xogta socodka waa furaha! Xog ururinta nidaamka nidaamka gudaha iyo ilaha dibada, ku soo biirida waqtiga-dhabta ah, nadiifinta xogta, laga yaabee inaad sameyso is waafajin jahwareer ah ka dibna aad u gudbiso aragtiyo, digniino iyo ogeysiisyo si ficil looga dhigo waa wax qurux badan. Shirkadaha u wareejin kara suuq geyntooda waqtiga-dhabta ah waxay leeyihiin faa'iido weyn. Shirkad ayaa laga yaabaa inay bilawdo isticmaalka xogta qulqulka si ay u hesho guulo deg deg ah iyadoo abuureysa 10-15% ku lug lahaansho, laakiin waxay si dhakhso leh u ogaan doonaan inay leedahay faa'iidooyin dhaxal gal ah wax soo saarkooda, iibintooda, rarkooda, fulintooda, iwm. .